Qatar Airways oo laba jibaartay duulimaadyadii Lagos |
Bogga ugu weyn » Wararka Dalxiiska » Qatar Airways ayaa labalaabaysa duulimaadyada Lagos
Shabakadda Qatar Airways ’waxay kordhin doontaa 14 duulimaad toddobaadle ah oo ay aadi doonto Murtala Muhammed International Airport, laga bilaabo 1da Luulyo
Qatar Airways ayaa kordhisay adeegyadeeda xarunta dhaqaalaha ee Nigeria.
Duulimaadyada Lagos waxaa ka shaqeeya Boeing 787 Dreamliner oo ka kooban 22 kursi oo ah Qaybta Ganacsiga iyo 232 kursi oo ah Heerka Dhaqaalaha.
Kordhinta soo noqnoqodka ah ayaa rakaabka siin doonta xitaa dabacsanaan badan.
Iyada oo laga jawaabayo baahida sare, Qatar Airways ayaa kordhisay adeegyadeeda xarunta maaliyadeed ee Nigeria, Lagos, ilaa laba duulimaad oo maalinle ah oo ka bilaabanaysa 1da Julaay 2021. Waxaa ku shaqeeya Boeing 787 Dreamliner oo si casri ah loo soo bandhigayo oo leh 22 kursi oo ah Qaybta Ganacsiga iyo 232 kursi oo ah Heerka Dhaqaalaha, kororka soo noqnoqodka ah u siiso rakaabka xitaa dabacsanaan badan si ay ugu safraan markabka iyada oo la raacayo heerarka ugu sarreeya ee tallaabooyinka nadaafadda iyo in lagu raaxeysto waayo-aragnimo safar oo aan xaddidneyn oo saaran garoonka diyaaradaha ee Hamad International Airport.
Marka lagu daro Côte d'Ivoire 16kii Juun oo ah meeshii afaraad ee Afrikaan ah ee cusub tan iyo markii uu billowday cudurka, Qatar Airways ayaa hadda ka shaqeysa in ka badan 100 duulimaad toddobaadle ah illaa 27 meelood oo ku yaal Afrika. Qatar Airways ayaa sidoo kale ka shaqeysa saddex duulimaad todobaadle ah oo ka timaada magaalada Abuja, iyadoo isku xireysa rakaab badan oo ka yimaada Nigeria iyo shabakadda si xawli ah ku sii kordheysa ee duulimaadka oo haatan ka badan 140 meelood.
Madaxweyne ku xigeenka Qatar Airways, Afrika Mr. Hendrik Du Preez ayaa yiri: “Nigeria waa suuq aad muhiim noogu ah waana sii wadi doonnaa inaan siino xulashooyin badan oo safar ah iyo isku xirnaansho aan kala go’ lahayn oo aan ku xirno isku xirka ugu weyn ee taga dhamaan Asia-Pacific, Europe, Middle Bariga iyo Waqooyiga Ameerika.
“Ka dib sanad uun markii aan dib u bilaabanay duulimaadyadii Lagos oo aan bilaabay Abuja, ka dib caqabadihii uu soo rogay aafada, waxay markhaati u tahay adkeysiga gobolka Afrika oo aan hada ku kordhinay joogteena Lagos. Waxaan rajeyneynaa inaan soo dhoweyno rakaabka diyaaradda si aan ugu raaxeysanno martigelintayada iyo adeeggeena heer caalami ah. ”
Shirkadda Qatar Airways QCSC, oo ka hawlgasha Qatar Airways, waa shirkad ay leedahay dawladda Qatar.